Iyo Raspberry Pi inogona zvakare kuiswa yakavhurikaSuSE 13.1 | Linux Vakapindwa muropa
Iyo miniPC yakave yakabudirira ine akawanda uye akawanda mashandiro masisitimu anowanikwa. Uye kwemwedzi mishoma isu tine mufananidzo mutsva we openSuSE 13.1 for the Raspberry Pi. Kutenda kukuru kunoenda kuchikwata chiri kutarisira ArM kuvaka mukati meyakavhurikaSuSE nharaunda yekusimudzira.
Chokwadi unotoziva mamwe masisitimu anoshanda seRaspbian (zvichibva pakugovera kwaDebian), Pidora (Fedora edition yeRaspi), RISC OS (yakagadzirwa naAcorn yakanyatsogadzirirwa ARM), Moebius, Arch Linux yeARM, pamwe nezvimwe zvakakosha zvekuendesa maseva (arkOS uye Raspbian Server Edition) kana kuti ishandiswe seMedia Center (OpenELEC, Raspbmc uye Xbian) uye zvimwe zvinoda kuziva zvakaita sePiMAME kana RetroPie, yevanoda mitambo yeArcade. Pasina kukanganwa iyo inoshamisa Android, Ronga 9, Firefox OS, ...
Uyu mufananidzo we openSuSE 13.1 yeiyo Raspberry Pi Iyo inouya nekuvandudzwa pamusoro peiyo yapfuura, sezvo iri yakareruka, inoyerera poindi rutsigiro rweARMv6, anopfuura 5200 mapakeji esoftware, nezvimwe. Uyezve, ine simba rakaringana uye rakajairika-chinangwa kugovera, kubva kwaunogona kushanda pane yakavhurikaSuSE 13.1 inomhanya uchitenda kune "diki Hardware".
Mamwe mashoko - Raswik: nyowani yekuwedzera-yeiyo Raspberry Pi
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » OpenSuSE 13.1 yeiyo Raspberry Pi